Saturday February 02, 2019 - 22:58:14 in Wararka by Mogadishu Times
Khamiista 7-da bishan Febraayo, waxaa hotel ku yaalla London ka furmi doona shirka xaraashka kheyraadka shidaal iyo gaas ee Soomaaliya. Haddaba yaa maalgalinaya shirkaasi? Waa qeybtii hore ee bishii May 2015. Goobtu waa hotelka Tower Bridge oo ku
Khamiista 7-da bishan Febraayo, waxaa hotel ku yaalla London ka furmi doona shirka xaraashka kheyraadka shidaal iyo gaas ee Soomaaliya. Haddaba yaa maalgalinaya shirkaasi? Waa qeybtii hore ee bishii May 2015. Goobtu waa hotelka Tower Bridge oo ku yaalla daanta Wabiga Thames ee magaalada London. Labo nin oo ka tirsan shirkadda Schlumberger ayaa ku fadhiya kuraas taalla qeybta soo dhoweynta hotelka. Waxaa hareer yaalla labo boorso oo kuwa gacanta ah, naqshadda bedka dhulka Soomaaliya iyo waraaqo waaweyn (flip chart) oo duuduuban yaallana cagaha hoostooda. Labada nin oo si isku eg u gashan muraayadaha indhaha (ookiyaalayaal), waxay u fadhiyaan si dulqaad leh. Waa da' dhexaad kor cad. Waxay u muuqaal eg yihiin dad ladan, ama ugu yaraan maamulayaal bangi.
(LA SOCO QEYBTA 2AAD oo ay ku jito Schlumberger iyo kaalintii dagaalkii Ciraaq).